Umhubhe uhlelo oluphuthumayo lwezingcingo lwezinsizakalo eziphuthumayo-Izindaba-Ningbo Joiwo Explosion proof Technology Co., LTD
ISIKHATHI: 2020-11-17 HITS: 16
Ngenxa yesikhala esilinganiselwe se- umhubhe onguthelawayeka, uma kwenzeka ingozi, njengomlilo, ukuzamazama komhlaba, ukuwa, noma ingozi yomgwaqo edala abantu, kuba nobunzima obuningi emsebenzini wokutakula. Ngokwakhiwa okusheshayo kwe- a umhubhe uhlelo oluphuthumayo ipulatifomu esekwe "kulayini ohlakaniphile", ukuma okuqondile, ukuxhumana, ukusakaza, ukuqapha kwemvelo nokudluliswa kwevidiyo kwabahlengi kungabonakala.
UNingbo Joiwo Umhubhe ohlakaniphile wesistimu yocingo oluphuthumayo inikeza ukwesekwa kwedatha yomyalo wokutakula on-site, okulula ukusebenzisana kwe-Rescue phakathi kweminyango eminingi kungathuthukisa ukusebenza kahle komsebenzi futhi kuqinisekise ukuthuthukiswa okuhlelekile komsebenzi wokusiza on-site.
Ngokuvulwa kwemigwaqo kazwelonke yemigwaqo kanye noxhumano lwemigwaqo emikhulu ezungeze amadolobha amakhulu ezifundazwe, ukwakhiwa kwemigwaqo emikhulu sekuqalile ukuqhubekela phambili ezindaweni ezihlangana nezifundazwe kanye nezindawo eziqhelile. Amabhuloho nemihubhe enza inani elandayo lemigwaqo emikhulu. Uma sibheka emuva ezingozini zomlilo emhubheni emhlabeni jikelele, Senze umonakalo omkhulu kanye nokulahleka kwempahla. Kungashiwo ukuthi ukutakulwa kwezingozi zomlilo emhubheni sekuyinkinga enkulu ebhekene nawo wonke amazwe emhlabeni namuhla.
The umhubhe onguthelawayeka "iyisikhala esincane neside se-tubular", futhi izici zayo zokwakha zinquma ukuthi ingozi yomlilo engazelelwe yomhubhe ikakhulukazi inezici ezilandelayo:
1. Kunzima ukuhlenga nokukhipha;
2. Kunzima ukuqondisa nokusingatha ngokushesha;
3. Intuthu isakazeka ngokushesha, inobuthi, futhi akulula ukukhipha;
4. Uma umlilo uvele emhubheni omkhulu wendlela, kuzoba nzima kakhulu ukuhlenga izakhiwo nezinqolobane ezinzima kakhulu kunokujwayelekile, namaqembu ezokutakula azoba nzima ukutshala;
5. Indawo yokutakula inesikhala esilinganiselwe, futhi asikho isignali emhubheni, othinta ukushintshaniswa kolwazi, okuthinta ukusebenza kahle kokutakula. 1 Isidingo sepulatifomu yolwazi lokutakula oluphuthumayo kumigudu emide yomgwaqo omkhulu;
6. Umlilo usakazeka ngokushesha, uhlala isikhathi eside, futhi kunzima ukuwulawula. Uma umthwalo owethulwayo ungasha, ushise, uqhume, unamakhemikhali anobuthi futhi uyingozi, uvame ukudala inhlekelele ibe yimbi kakhulu;
7. Ukusabalala okusheshayo komlilo kwenza uhlelo lokukhanyisa, uhlelo lokuqapha kanye ne-alamu oluzenzakalelayo emhubheni lingahluleka ngesikhathi esifushane. Ngaphezu kwalokho, umlilo, intuthu eminyene kanye nokushisa okuphezulu okudalwe ukusabela kwamakhemikhali ayingozi nomhlabathi, kuvame ukwenza ukutakula Abasebenzi bangakwazi ukusondela, futhi
Ukwehluleka kwamandla ukukhanyisa kungashintshwa yi-generator. Lapho ukuxhumana sekuphazamisekile futhi neqembu lokutakula emhubheni lilahlekelwa ukuxhumana nomyalo, lingaba namandla amakhulut. Ngakho-ke uma kwenzeka inhlekelele emhubheni, ucingo lomhubhe oluphuthumayo lwe-Explosionproof kubaluleke kakhulu, it ukusiza ukwakha ngokushesha ipulatifomu ephelele yohlelo oluphuthumayo lomhubhe.
I-Ningbo Joiwo Explosion proof Technology Co., LTD ingumkhiqizi oneminyaka engu-15 yokuthuthukiswa komkhiqizo wokuxhumana ngocingo kanye nesipiliyoni sokukhiqiza. Inkampani iwine inqwaba yamalungelo obunikazi bemodeli yokusetshenziswa, amalungelo obunikazi wokubukeka nokubhaliswa kwesoftware. UNingbo Joiwo usebenzisana nezingcingo ezingangeni manzi nezinomswakama, izingcingo ezingafakwanga ukuqhuma, izingcingo ze-IP, izinhlelo zokuxhumana ze-IP zezimboni, iphasishi elingaphansi komhlaba lamaphayiphu we-fiber optical, izingcingo zokusakaza nezokukhanya ezikhulisiwe, nezingcingo eziphuthumayo eziphezulu.